နဂါး နှင့် လင်းယုန် ၏ရေအောက်စစ်ဆင်ရေးမျှခြေများ
Gen Z တို့ အ�...
a fella | 19/11/2020 | News | No Comments
⭐တရုတ်တို့သည်၎င်းတို့၏ သမရိုးကျရေငုပ်သဘောင်္တပ်ဖွဲ့အကြီးအကျယ်တိုးချဲ့ခဲ့ပြီး လက်ရှိတွင် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးသမရိုးကျရေငုပ်သဘောင်္တပ်ဖွဲ့ကြီးအားပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့ပါသည်။
ထို့အပြင်အရေအတွက်နည်း ပါးသော်လည်း ဆက်လက်တိုးချဲ့လျှက်ရှိသည့် ညူကလီးယားရေငုပ်သဘောင်္တပ်ဖွဲ့အားလည်းပိုင်ဆိုင်ထား ပါသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် အဆင့်မြင့်တင်ထားသည် AIP စနစ်အပါအ၀င် နည်းပညာသစ်များသုံးစွဲထားသည့် ယွန်အတန်းအစား ဒီဇယ်လျှပ်စစ်ရေငုပ်သဘောင်္များတည်ဆောက်ရေးတွင်ပိုမိုဝါယမစိုက်ထုတ်လျှက်ရှိပါသည်။
⭐တရုတ်တို့၏ဒီဇယ်ေ၇ငုပ်သဘောင်္များသည် တာဝန်အမျိုးမျိုးကိုထမ်းဆောင်နိုင်သော တရုတ်ရေတပ်၏ အခြေခံတစ်ခုဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။
ပိုမိုအရေးကြီးသောအချက်မှာ ပီကင်းအစိုးသည် တရုတ်နိုင်ငံ ပတ်ဝန်းကျင်ဆက်စပ် ပင်လယ်များသို့အမေရိကန် ပစိဖိတ်ရေတပ်၏ လွှမ်းမိုးထားမှုကို ကန့်သတ်ရန် အတွက် အရေးပါသော Platform အဖြစ်၎င်းတို့၏ သမရိုးကျဒီဇယ်ရေငုပ်သဘောင်္အုပ်စုကြီးအားရှုမြင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
အဓိကအားဖြင့် ပင်လယ်ဝါ၊ အရှေ့နှင့်တောင်တရုတ်ပင်လယ်တို့ဖြစ်သည်။
⭐အထူးသဖြင့် ရေငုပ်သဘောင်္များသည် တရုတ်ရေတပ်၏ ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်စွမ်းအရှိဆုံးသော ရင်းမြစ်များ ဖြစ်သည်ဟူသော အယူအဆကိုအခြေခံတားခြင်းဖြစ်သည်။
သီအိုရီအရ တရုတ်နိုင်ငံပတ်ဝန်းကျင်ပင်လယ်များ နှင့်ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်ကြား ကျယ်ပြောလှသော ရေပြင်အတွင်း အမေရိကန်တို့၏ လွှမ်းမိုးမှုကိုတုံ့ပြန်ရန်အတွက် ရေငုပ်သဘောင်္များသည်သာ အသင့်တော်ဆုံးဟု မှတ်ယူထားကြသည်။
အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် တရုတ်တို့၏အဆိုပါခြေလှမ်းကို Anti-access/area denial A2 AD Strategy ဟုသတ်မှတ်ထားပါသည်။
A2AD တွင် ရေတပ်Platform များလက်နက်စနစ်များ နည်းဗျူဟာများ အများအပြားပါဝင်ပြီးလူအများစိတ်ဝင်စားမှုများသောအချက်မှာ တရုတ်တို့၏သဘောင်္ဖျက်ဒုံးပျံများစွမ်းရည်ပင် ဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း အမေရိကန်ပစိဖိတ်ရေတပ်၏ ဌာနချုပ်မှူး Admiral Robert Willard ကမူ A2AD တွင်တရုတ်တို့၏ အခြား Navy Platform များလက်နက်စနစ်များထက် တရုတ်ရေငုပ်သဘောင်္တပ်ဖွဲ့သည်သာ အခြိမ်းခြောက်နိုင်ဆုံး ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
သူ၏အဆို မှာမှန်ကန်ကြောင်းပြဆိုနေသည့် အဖြစ်အပျက်မှာ ၂၀၀၆ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအတွင်း အမေရိကန်လေယာဉ်သဘောင်္နှင့် ၅မိုင်အကွာရေပြင် သို့ တရုတ်တို့၏ဆောင်အတန်းစားရေငုပ်သဘောင်္ချည်းကပ်မှုကို မသိရှိခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါအကွာအဝေးသည် တော်ပီဒိုနှင့်သဘောင်္ဖျက်ဒုံးပစ်လွှတ်နိုင်သည့်အကွာအဝေးပင်ဖြစ်သည်။
⭐တရုတ်တို့၏သမရိုးကျရေငုပ်သဘောင်္များသည် ညူကလီးယားစွမ်းအင်သုံး ရေငုပ်သဘောင်္များထက်စစ်ဆင်နိုင် စွမ်းနှင့် ကြံ့ခိုင်မှု များစွာနည်းပါးပါသည်။
သို့သော်လည်း ကမ်းနီးပင်လယ်ရေတိမ်ပိုင်းများတွင် မူများစွာစွမ်းရည်မြင့်မားသောလက်နက်စနစ်ပင်ဖြစ်သည်။
ရေတိမ်ပိုင်းများတွင်စစ်ဆင်မှုတွင် အမေရိကန်တို့၏ Sub Hunter ဟုတင်စားထားသည့် P3C Orion ကဲ့သို့ ASWလေယာဉ်မျိုးကိုပင်လှည့်စားနိုင်စွမ်းရှိပါသည်။
⭐အမေရိကန်တို့အနေဖြင့် ပင်လယ်ပြင်လမ်းကြောင်းများ နှင့်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများအား ကာကွယ်ရန် ၄င်းတို့၏ခေတ်မှီလှသောရေတပ်ဖွဲ့များအား ကမ္ဘာ့ပင်လယ်ပြင်အနှံ့အပြားသို့တပ်ဖြန့်ထားရပါသည်။
အမေရိကန်ရေတပ်တွင် သမရိုးကျဒီဇယ်လျှပ်စစ်ရေငုပ်သင်္ဘောတစ်စီးမျှပါဝင်ခြင်းမရှိပဲ ညူကလီးယားရေငုပ်သဘော် ၅၄ စီးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည် အဆိုပါအရေအတွက်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမား ဆုံးညူကလီးယားရေငုပ်သဘောင်္တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ကြောင်းပြဆိုနေပါသည်။
အမေရိကန်တို့၏ ညူကလီးယားရေငုပ်သင်္ဘော ပိုင်ဆိုင်မှုသည် တရုတ်တို့၏သမရိုးကျရေငုပ်သဘောင်္ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အရေအတွက် မှာမတိမ်းမယိမ်းဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်းအမေရိကန်တို့သည်၎င်းတို့၏ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွား အတွက် ရေငုပ်သဘောင်္များအားစုစည်းထားနိုင်ခြင်းမရှိပဲကမ္ဘာ့အနှံ့အပြားသို့ဖြန့်ကျက်ချထားရပါသည်။
⭐စစ်အေးတိုက်ပွဲအမြင့်မားဆုံးသောအချိန်တွင် အမေရိကန်တို့သည် အတ္တလန်တိတ်သမုဒ္ဒရာ စစ်နယ်ဝှမ်းတွင် ဆိုဗီယက် ရေငုပ်သဘောင်္တပ်ဖွဲ့များအားချေမှုန်းနိုင်ရန်အတွက် Passive Acoustic Detection နှင့် Submarine Silencing နည်းပညာများအား ပိုမိုအားစိုက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကာ ရလဒ်အနေဖြင့် Virginia နှင့် Seawolf ကဲ့သို့အဆင့်မြင့် ညူကလီးယားရေငုပ်သဘောင်္များပိုင်ဆိုင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုရေငုပ်သဘောင်္များအား တရုတ်တို့၏အရေအတွက်အနည်းငယ်သာပိုင်ဆိုင်ထားသော အသံဆူညံလှသည့် ရှန်အတန်းစား ညူကလီးယားရေငုပ်သဘောင်္များသည်မည်သို့မှယှဉ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
⭐ထို့အပြင် ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်ကဲ့သို့ ရေနက်ပိုင်း ပင်လယ်များအတွင်းစစ်ဆင်မှုများတွင် တရုတ်တို့၏ သမရိုးကျရေငုပ်သဘောင်္များသည် အားနည်းချက်များပြားပါသည်။
တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှ ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်သို့ ထွက်ပေါက်မှာ တိုင်ဝမ်ကျွန်း၏ အရှေ့မြောက်ဘက် ရူးကျူး ကျွန်းစုထွက်ပေါက်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ပုလင်းလည်ပင်းကဲ့သို့ထွက်ပေါက်အား အမေရိကန်တို့၏ ရေငုပ်သဘော်များ၊ရေငုပ်သဘောင်္တိုက်ဖျက်ရေး ကင်းလှည့်သဘောင်္များ ပင်လယ်ပြင်ထောက်လှမ်းရေးစနစ်များ ဖြင့်လွှမ်းခြုံထားပါသည်။
⭐မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ တရုတ်တို့၏သမရိုးကျရေငုပ်သဘောင်္တပ်ဖွဲ့ကြီးသည် A2AD Strategy ၏ အခြေခံအကျဆုံးကဏ္ဍမှဆက်လက်ကြီးထွားနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
သို့သော်လည်း အမေရိကန်တို့၏ ပစိဖိတ်ရေ တပ်အားခြိမ်းခြောက်နိုင်ရေးအတွက်မူ သဘာဝအခြေအနေများ၊ နည်းဗျူဟာလှည့်စားမှုများအားဘက်စုံထောင့် စုံမှထည့်သွင်းတွက်ချက်ရန်လိုအပ်ချက်များရှိနေဆဲဖြစ်ပါကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါသည်။
မူရင်းရေးသားသူ “ကြယ်နီ” အား လေးစားစွာဖြင့် ခရက်ဒစ် ပေးပါသည်။
တောင်ကိုရီးယားရေတပ်က ပြည်တွင်းထုတ် ခရုဇ်ဒုံးကျည်ကိုရေငုပ်သင်္ဘောမှ ပစ်လွှတ်စမ်းသပ်၊ အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ ( တာဝေးပစ်ဒုံးကျည်တွေဟာ မဟာဗျူဟာအရ ဘယ်လောက်အရေးကြီးတောင်ကိုရီးယား နားလည်လာခဲ့ပြီလား…)
အဝီစိကို နယ်ချဲ့နေတဲ့ စင်ကာပူ ( ခုလိုလုပ်လိုက်တဲ့အတွက် မြေပြင်ပေါ်မှာ မြေနေရာအလွတ်ဟာ ဘောလုံးကွင်း ၈၄ ကွင်းစာလောက် ရသွားစေပါတယ်။ )
တရုတ်က ဖိလစ်ပိုင်ကို အပျော့နည်းနဲ့ ကျူးကျော်ခြင်း ( အပျော့ဆွဲ ဆွဲလာလိုက်တာ အခုဆို တရုတ်လူမျိုး ၄သန်းကျော် ဖီလစ်ပိုင်ထဲ ရောက်နေကြပြီ…. မြန်မာနိုင်ငံမှာရော ဘယ်လောက်များနေမလဲ…)
ဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ ရီပါပလီကန်ပါတီ တသက်လုံး မဲနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ ထရမ့် လက်ထက်ကျမှ အရှုံးကြီး ရှုံးရတဲ့အကြောင်းအရင်း…( အသံကြောင့် ထရမ့် သေတာပေါ့….)
“သီးစုံအခဉျြပေါငျးရောငျးသူ မုံရှာမွို့ ထနျးတော ညောငျရိပျသာရပျကှကျနေ မတငျတငျအေး နှငျ့တှဆေုံ့ခွငျး။ ( အနျတီရယျ နောကျဆုံးပွော သှားတဲ့ စကားနဲ့ တငျ အရမျးကိုလေးစားပါတယျ )
တရုတျလုပျ အျောတို မီးအားမွှငျ့စကျမြား (သို့မဟုတျ) အိမျတှငျး သူခိုးမြား
မွနျမာပွညျတှငျ ရဲ တယောကျ ခပျနှမျးနှမျး ဝတျစုံ နဲ့ လကျထဲ 500 တနျလေးကိုငျပီး ရှရေငျအေး လာဝယျသော အခါ
Gen Z တို့ အတှကျ အားကစြရာလူငယျတဈယောကျ (သို့မဟုတျ) Joshua Wong
တခွငျးငါးရာ တခွငျးငါးရာဆိုပီး စတျောဘယျရီတှေ ယူနီဖောငျးကွီးနဲ့ အျောရောငျးနလေို့ သှားမေးကွညျ့သော အခါ
လကျရှိ အသုံးပွုနတေဲ့ Tear Gas မကျြရညျယိုဗုံးအကွောငျး သိကောငျးစရာနဲ့ ကာကှယျရမယျ့ နညျးလမျးမြား (အသုံးဝငျတာမို့ ရှယျပေးကွပါ)
© 2021 NepTimes.
Theme by neptime.